अमेरिका ब्वाईज २ करोडमा सकेको दाबीFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
अमेरिका ब्वाईज २ करोडमा सकेको दाबी
फिल्मी फण्डा । फिल्म ‘अमेरिका ब्वाईज’ को इन्डक्ल्याप गरिएको छ । निर्माण यूनिटले सुटिङ मै २ करोड खर्च भएको दाबी गर्दै इन्डक्ल्याप गरिएको हो । ६० दिन लगाएर झापा र काठमाण्डौंमा सुट गरिएको उक्त फिल्मको छायांकन २ करोड बजेटमा सकिएको निर्माण पक्षले बताइएको हो ।
फिल्मका कार्यकारी निर्माता प्रकाश भूजेलले कथावस्तु अनुरुप सुट गर्दा २ करोड बजेट पुग्न गएको दाबी गरे । बड्डी इन्टरटेन्मेन्ट र सीबर्ड पिक्चर्सको प्रस्तुतिमा निर्माण गरिएको उक्त फिल्मलाई प्रवेश पौडेल निर्देशन गरेको हो । फिल्मले वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई उठान गरेको छ ।
फिल्मका सह निर्माता यमूना खरेल र राज केसी हुन् । फिल्ममा विवेक पाण्डेको कथा, आलोक शुक्लाको छायांकन तथा दीपक आर.जे र जयान जे. वाइवाको संगीत रहेको छ । निर्माण यूनिटले नयाँ वर्ष २०७५ लाई लक्षित गर्दै बैशाख १४ मा फिल्म रिलिज गर्ने तयारी गरेको थियो तर अब भने फिल्म आगामी जेठ ४ गते प्रदर्शनमा आउने भएको छ ।
कमेडी जनरामा बनेको फिल्ममा अर्पण थापा, सृष्टि कार्की, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरासिया, सुनिल थापा, हरिहर शर्मा, अभय बराल, मनिष राउत, रुबि राना, सुवास गजुरेल लगायतका कलाकारले अभिनय रहेको छ ।